धानमा बाला नलाग्दा कृषकहरु मर्कामा ! धान नकाट्न केन्द्रको आग्रह - Nepal Readers
Home » धानमा बाला नलाग्दा कृषकहरु मर्कामा ! धान नकाट्न केन्द्रको आग्रह
धानमा बाला नलाग्दा कृषकहरु मर्कामा ! धान नकाट्न केन्द्रको आग्रह
चितवन जिल्लामा लगाइएको आयातित गरिमा जातको वर्णशङ्कर धानमा बाला नलागेपछि किसानले बारी खाली गर्न थालेका छन् । धानपछिको हिउँदे बाली लगाउन ढिला हुने भएकाले कृषकले धान काटेर बारी खाली गर्न लागेका हुन् ।कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले बाला नलागेको धानको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनका लागि अप्ठ्यारो हुने भएकाले केही दिन धान नकाट्न आग्रह गरिएको बताएको हो । कतिपय स्थानमा बाला निस्कन थालेको र कतिपय ठाउँमा बाला निस्कने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यो जातको धानको डिएनए परीक्षण भइरहेकाले यसका लागि अझै एक साता कुर्नुपर्ने उनले भने ।